Manufacturers Pillow Block Ball Bearing, mpamatsy - China Pillow Block Ball Bearing Factory
Andiany ampidirobe miaraka amin'ny UCP 200 mazava tsara
● Firafitry integral henjana, mora apetraka.
● Wide peratra anatiny: conducive ho jacking hidin-trano, mafy kokoa.
● Tady ambony: tariby roa ambony miaraka amin'ny zoro 120 degre eo amin'ny peratra anatiny mba hahazoana antoka fa mora ny mifatotra amin'ny tariby.
● peratra fihazonana: misy iray amin'ny andaniny roa, hanakana tsara ny vovoka.
● Contact fingotra tombo-kase: dia apetraka eo amin'ny anatiny ny retainer peratra amin'ny lafiny roa.
Ampidiro tsara kalitao miaraka amin'ny trano UCP X00
Serie Housing mitondra UCP300
Mpanamboatra spherical radial insert baolina mitondra UCF
Fitondrana boribory ivelany miaraka amin'ny seza dia vondrona mitondra izay manambatra ny fihodinana sy ny seza fitondra.Ny ankamaroan'ny spherical ivelany dia ny savaivony ivelany amin'ny sehatra, ary miaraka amin'ny trano fonenan'ny lavaka anatiny napetraka miaraka, ny endriky ny rafitra dia isan-karazany, manerana izao rehetra izao ary ny fifanakalozam-bola tsara.
Ny vidiny sy ny fotoana nitarika ny UCFX00
Ny refy dia eo anelanelan'ny UCF200 sy UCF300, tsy dia kely loatra, ny mari-pamantarana hetsika manokana sy ny famolavolana dia mitovy, ny fahasamihafana eo amin'ny refy, raha tsy manana ny fitakiana afovoany avo, dia afaka manolo matetika.
Ny marika XRL avo lenta amin'ny ondana misy UCFC
Ny tampon'ny fototra dia omena amin'ny lehiben'ny boribory, izay azo apetraka ao amin'ny lavaka boribory amin'ny rack, noho izany dia avo ny fametrahana mazava tsara ary marina ny toerana.
Ny lug bearing misy lug dia vokatra enti-mitondra voaforon'ny bearing, ny lug bearing miaraka amin'ny lug bearing ary ny lug bearing miaraka amin'ny lug bearing eo amin'ny tampon-kavoana.
Stainless vy mifono vy UCFL 200
Ny rafitra dia maivana sy mora apetraka, mety amin'ny faritra kely amin'ny fifindran'ny faritra.Ny elanelana afovoany amin'ireo loaka bolt roa dia mifanaraka amin'ny elanelan'ny afovoan'ny seza efajoro diagonal bolt lavaka mitovy karazana.
Fampiharana lehibe UCFL: fametrahana ny haben'ny elanelana kely amin'ny milina, roller conveyor, milina sakafo, milina pharmaceutika, sns.
XRL marika china malaza mitondra UCFL X00
Ny rafitra dia maivana sy mora apetraka, mety amin'ny faritra kely amin'ny fifindran'ny faritra.Ny elanelana afovoan'ny lavaka bolt roa dia mifanaraka amin'ny halaviran'ny afovoan-tany amin'ny seza efajoro diagonal bolt lavaka mitovy karazana
Fampiharana lehibe UCFL: fametrahana ny haben'ny elanelana kely amin'ny milina, roller conveyor, milina sakafo, milina pharmaceutika, sns
Vidiny mifaninana insert avo lenta mitondra UCFL 300
Karazana marika XRL mampiditra bearings UCT200
Ny sakana slider dia mety amin'ny fampiharana mitaky fanitsiana amboara sy fitaovana fihenjanana fehikibo, toy ny fampiharana conveyor.Manana endrika roa izy io: seza vy vita amin'ny vy ary seza vy misy fitomboka;Ny endrika tsirairay dia manana rafitra fanidiana isan-karazany azo isafidianana.Ny blocs dia mety amin'ny fampiharana entana mahazatra;Ny sakana slider ram vy dia mety amin'ny fampiharana ara-toekarena sy maivana.
Ampidiro sakanana mitondra UCT300
Feo ambany ary ampidiro bearings miaraka amin'ny UCC mazava tsara
Nomena vy sy fingotra roa karazana seza peratra, mampiasa 10 kilasy fisarahana mazava tsara baolina vy sy super famaranana raceway, dia afaka manohana ny sasany menaka fanosotra sarimihetsika, mampihena ny tabataba.